1aviagem.com - Iingcebiso, iintliwano-ndlebe, amabali athethwa ngethuba lokuqala
Iingcebiso, udliwano-ndlebe, amabali athethwa ngethuba lokuqala
Kutheni eli gama?
Cwangcisa uhambo lwakho
Imali (i Quotation)
EMntla naseMntla eMelika
I-Nossas Redes Sociais
Vula ukugqume ngaphezulu kwewijethi
ICosta Rica Ilizwe elenze ukhetho olufanelekileyo!
ICosta Rica, ilizwe elenze ukhetho olufanelekileyo! Ah! ICosta Rica, eli lizwe kuhambo lwam lokuqala apho lundothusile ngaphezu kwezinto ebendizilindele! Kwaye luluphi ukhetho abalwenzileyo? Ndikuxelela ngoku. Njani ngokuhamba ngexesha loBhubhane? Phambi kokuba uthethe ngeCosta Rica…
Funda ngokugqithisileyo ICosta Rica Ilizwe elenze ukhetho olufanelekileyo!
I-United Kingdom, Umhlaba weti ye-5am kunye nendawo yokungafiki emva kwexesha!
Namhlanje siza kuthetha nge-UK, ilizwe elaziwa nge-5: 00 pm iti, kwaye ungalibazisi! Ukufika eLondon ukusuka eHeathrow International Airport kuhambo lwam lokuqala lokuya e-UK, kwakusele kunokwenzeka ukubona into elungileyo kakhulu kubakhenkethi. Isikhululo seenqwelomoya sidityaniswe kwindlela engaphantsi. Kwaye…
Funda ngokugqithisileyo I-United Kingdom, Umhlaba weti ye-5am kunye nendawo yokungafiki emva kwexesha!
IBelgium-lilizwe elifanelekileyo ukufunda ii-comics, ngelixa usela ibhiya kunye nokutya iitshokholethi
Namhlanje siza kuthetha ngeBelgium, ilizwe eli malunga nokuhlekisa, ibhiya kunye neetshokholethi. Ndiyathemba ukuba ukufunda kuyonwabisa! Ekugqibeleni siyakumangaliswa (kuphela abaseBrazil, okwangoku). Antwerp - ikomkhulu ledayimane Indawo entle yokufika eBelgium. Ukuba kuyenzeka, ndincoma uloliwe, kuba sele e…
Funda ngokugqithisileyo IBelgium-lilizwe elifanelekileyo ukufunda ii-comics, ngelixa usela ibhiya kunye nokutya iitshokholethi
Mangaphi amabhaso kaNobel afanelekileyo ngumama wakho? -Usapho lakwaCurie lusekwe ubuncinci i-2 - iPoland neFrance
Ngolu suku lukaMama ndingathanda ukuphakamisa lo mbuzo: Mangaphi amaBhaso kaNobel afanelekileyo ngumama wakho? Ndicinga ukuba ngokusinika isipho sobomi, sele elifanele elinye, elinye lize ngokusixhasa de sibe nesibindi kwaye sihambe ngemilenze yethu. Ewe, usapho lakwaCurie luseke ubuncinci ama-2…
Funda ngokugqithisileyo Mangaphi amabhaso kaNobel afanelekileyo ngumama wakho? -Usapho lakwaCurie lusekwe ubuncinci i-2 - iPoland neFrance
Kutheni iinkampani zaseBrazil kufuneka zihambelane ne-ESG-ingqikelelo yoLawulo lwezeNtlalo, kwaye inganceda njani wonke umntu.
Yintoni i-ESG? Umxholo we-ESG ngumlinganiso phakathi kwewododod: okusingqongileyo, intlalo kunye nolawulo lweshishini. Kule mibuzo singabonisa indlela yokwenza oku: Indalo esingqongileyo: Umbuzo wendalo esingqongileyo ubandakanya: utshintsho lwemozulu, izixhobo zendalo, ungcoliseko, inkunkuma kunye nendalo. Ezentlalo: Kwindlela yokulinganisa eluntwini sinokuqaqambisa: amandla oluntu, amathuba okuhlala,…
Funda ngokugqithisileyo Kutheni iinkampani zaseBrazil kufuneka zihambelane ne-ESG-ingqikelelo yoLawulo lwezeNtlalo, kwaye inganceda njani wonke umntu.
Uhambo lokuqala oluya e-Austria-Ilizwe elaguqula ilizwe-eVienna
Ukuthatha ithuba lokuhlukaniswa yedwa (ngenxa ye-COVID-19) ukuhlaziya ibhlog. Khumbula, ukuba uyaphuma, nxiba imaski, ukuba unokugonywa uthobele imigaqo yezempilo. Xa sele sithethile, ngaba siza kutyelela iOstriya? Ukufuna ukwazi Into yokuqala ekufuneka uyikhumbule kukuba e-Austria olona lwimi luphambili sisiJamani. Kodwa yima…
Funda ngokugqithisileyo Uhambo lokuqala oluya e-Austria-Ilizwe elaguqula ilizwe-eVienna
ElamaDatshi? Umgangatho ophezulu waseHolland kunye neyantlukwano
Ukuthatha indawo yokuvalelwa yedwa, masiyihlaziye le bhlog kancinci. Umbono omkhulu kukujonga kwakhona ialbham yefoto. Kwaye uyiqwalasele kwakhona, eyayinokuba "luhambo oluya kwikamva", nakwindalo iphela yenkcubeko! Ewe, namhlanje siza kuthetha ngeHolland, ilizwe elifundisa kakhulu phantse kuzo zonke izifundo. IHolland i…
Funda ngokugqithisileyo ElamaDatshi? Umgangatho ophezulu waseHolland kunye neyantlukwano
Uhambo lokuqala oluya eLithuania - eVilnius - Ukubona abahlobo abalungileyo
Yintoni eyandichukumisa kakhulu? Ukudibana nomhlobo wam osuka eBelarus, okhulelweyo, owela umda ukuze abone umhlobo wakhe omdala waseBrazil kwakhona, la ngamava awodwa. Kwaye usenezipho ezininzi! Ipini kunye nekhadi lokuposa elivela eMinsk, kunye needoli ezivela eBelarus ngethamsanqa (Oh kunye cookies ...
Funda ngokugqithisileyo Uhambo lokuqala oluya eLithuania - eVilnius - Ukubona abahlobo abalungileyo
Kutheni le nto iPrague yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuchitha iHalloween? - Umphakathi waseCzech
Siyazi ukuba umhla wama-31 ku-Okthobha uthathwa njengeHallowen, okanye, iHalloween, iholide engekabi yinxalenye esemthethweni yekhalenda yaseBrazil, kodwa ibhiyozelwa kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. Apha eBrazil sinomhla wesi-02 kuNovemba, iholide kunye nosuku lwabafileyo. Kodwa kutheni iCzech Republic…
Funda ngokugqithisileyo Kutheni le nto iPrague yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuchitha iHalloween? - Umphakathi waseCzech
Zisifundisa ntoni iiMeya kunye neeAztecs malunga nobhubhane? - Mekhsikho
AmaMeya kunye nama-Aztec, kwanasemva kweenkulungwane, zisasifundisa okuninzi! Ukuba sijonga kwimbali ethe kratya sinokufunda kwaye singaziphindi iimpazamo. Ngaba wakha wazibuza ukuba kutheni abaseYurophu belawula iMelika hayi enye indlela? Ewe, ukuba uphendula lo mbuzo ngokuthi kungenxa yokuba…
Funda ngokugqithisileyo Zisifundisa ntoni iiMeya kunye neeAztecs malunga nobhubhane? - Mekhsikho
Kutheni umhlaba waseSanta upholile kangaka? -I-Finland-IHelsinki
Ndiyazi ukuba kusekho into encinci ngaphambi kweKrisimesi, kodwa bendifuna ukubhala ngomhlaba kaSanta Claus kwaye kutheni ndingathethi ngohambo lwam lokuqala phaya? Makhe sithethe kancinci malunga neFinnns, aba bantu basebenzayo nabaxhasayo. Ndafika njani eFinland? Eyam yokuqala…
Funda ngokugqithisileyo Kutheni umhlaba waseSanta upholile kangaka? -I-Finland-IHelsinki
Njani ukubhabha ngeQatar Airways, kunye nesikhululo senqwelomoya.
Kubhabha njani ngeQatar Airways? Ngaba uyalazi elo thuba livela ebomini bakho nelingenakuphindwa? Kulungile, olu ibiluhambo lwam lokuqala kunye neQatar Airways. Iskripthi besele silungele iAsia, kodwa ngenxa yokunyanzelwa kwe-majeure kwakungekho lula ukugqibezela i-aerial, ethi…
Funda ngokugqithisileyo Njani ukubhabha ngeQatar Airways, kunye nesikhululo senqwelomoya.
I-Uruguay ilizwe elahlukileyo elivela eMzantsi Melika. -Montevideo
Ndithathe ithuba lokukhululeka kwesi sithuba, ndigqibe kwelokuba ndibone iifoto zohambo oludala kwaye… Ndiqaphele ukuba ndinemathiriyeli eninzi yokuhlaziya ibhlog kunokuba bendicinga. Ke namhlanje ndiza kuthetha kancinci nge-Uruguay. Ilizwe elahluke kakhulu kuMzantsi Merika, ngoba? Ngenxa yemigaqo-nkqubo yabo yoluntu. Kwi…
Funda ngokugqithisileyo I-Uruguay ilizwe elahlukileyo elivela eMzantsi Melika. -Montevideo
Udliwanondlebe neBrazil, anjani amava otshintshiselwano? -Firenze - e-Itali
Anjani amava oTshintshiselwano? Namhlanje siza kukuzisa kancinci ukuba amava okufunda aphesheya anjani. Ukwenza oku ndiza kuthembela kuncedo lukaThereza. Ewe, sadibana xa efika eBrasilia ukuza kubhiyozela usuku lokuzalwa lukadadewabo. Uthathe inxaxheba kwinkqubo “yeNzululwazi engenaMida” kwaye wayephumelele…
Funda ngokugqithisileyo Udliwanondlebe neBrazil, anjani amava otshintshiselwano? -Firenze - e-Itali
Ikhohlo vs. I-ideology elungileyo, kutheni iphantse ingachazeki ukuba leliphi icala?
Mva nje eBrazil kuye kwakho intetho eninzi malunga nemfazwe ekucingelwa ukuba yayiyingcinga, phakathi kwabantu abacinga "ngendlela elungileyo" ngokuchasene nabantu abacinga "ngaphezulu ngasekhohlo". Kodwa uyazi ukuba athetha ntoni la magama? Ngaphambi kokuba siqale, masibone ukuba la magama avela phi. Imvelaphi yasekhohlo nasekunene…
Funda ngokugqithisileyo Ikhohlo vs. I-ideology elungileyo, kutheni iphantse ingachazeki ukuba leliphi icala?
Ngaba ukuthenga kwiCiudad Del Este kufanelekile? - Pharaguwayi
Kulungile bafo, kuba sihleli sodwa, ndaye ndagqiba kwelokuba ndiphonononge iifoto ezindala kwaye phakathi kwazo ndafumana olunye uhambo lwam lokuqala eParaguay. Kwaye ndacinga: Wowu, bathetha kakhulu ngeParaguay, kutheni ndingazukuthetha kancinci ngayo? Nasi isiphumo. Iphi i? IParaguay ikuMzantsi Merika ...
Funda ngokugqithisileyo Ngaba ukuthenga kwiCiudad Del Este kufanelekile? - Pharaguwayi
Ukugqabhuka - iBrasilia - iBrazil
Kukho i-10.114 efile nge-09/05/2020 (kwaye inyuka), oku kungenxa ye-COVID-19. Ngaba ijika lexhoba liye lenyuka ngokwaneleyo kwabo bafuna ukubona incopho yegophe? Ulugcina njani uqoqosho ngabasebenzi abaswelekileyo? Ubatsala njani abatyali mali bangaphandle ukuba ufuna ukudibanisa umfanekiso wabo nokufa? Ba…
Funda ngokugqithisileyo Ukugqabhuka - iBrasilia - iBrazil
Uhambo lweentsuku ezintathu lweBariloche-Argentina
Uhambo lweentsuku ezi-3 lokuya eBariloche - eArgentina Kwaye ngeli xesha lokuvalelwa yedwa akukho nto ibhetele kunokuthatha ialbham yakudala kwaye ujonge iifoto. Endibuyisele kuhambo lwam lokuqala lokuya eBariloche, eArgentina. Ndihleli iintsuku ezintathu kuphela edolophini, kwaye ndakwazi ukubamba izikhululo ezibini. Ilanga nekhephu. KUNYE…
Funda ngokugqithisileyo Uhambo lweentsuku ezintathu lweBariloche-Argentina
AmaMeya kunye noqikelelo lwesiphelo sehlabathi - iMexico
Yintoni esinokuyifundiswa ngamaMeya malunga nokuphela kwehlabathi? Kwixesha elidlulileyo, ngo-2012, abantu abaninzi beva ngesiphelo sehlabathi. Kwaye uninzi lweentsomi lwaphakanyiswa malunga nempucuko kaMayan. Emva kwayo yonke loo nto, amarhe athi ngekhalenda kaMayan, umhlaba uzakuphela ngo…
Funda ngokugqithisileyo AmaMeya kunye noqikelelo lwesiphelo sehlabathi - iMexico
IPilanesberg Park - ifoto yesafari kunye nezifundo ngezilwanyana- Mzantsi Afrika
Molweni bafo, le posi iza kuba ngumxube weengcebiso kunye nokuziphatha kwezilwanyana endikufunde kuhambo lwam lokuqala eMzantsi Afrika.Iingcebiso eKruger Park Uninzi lwabantu abacinga ngokuya eMzantsi Afrika, okanye abo bebelapho bacinga ukwenza umdlalo wefoto drive drive. I…
Funda ngokugqithisileyo IPilanesberg Park - ifoto yesafari kunye nezifundo ngezilwanyana- Mzantsi Afrika
Senze udliwanondlebe nomntu wasetyhini waseMexico kwaye weza neeNgcebiso zeCoronavirus kunye neeNgcebiso eMexico
Senze udliwanondlebe nomfazi waseMexico sazisa Iingcebiso malunga neNtsholongwane yeCorona kunye neeNgcebiso malunga neMexico! Ndadibana noÉrika kwisidlo sangokuhlwa eRio de Janeiro. Kwaye wajoyina iqela lethu lokutyelela kwaye sabelana ngetafile efanayo. U-rika wayefuna ukwazi ukuba itheyibhile yethu ibikumazwe aphesheya. Sasinabantu ...
Funda ngokugqithisileyo Senze udliwanondlebe nomntu wasetyhini waseMexico kwaye weza neeNgcebiso zeCoronavirus kunye neeNgcebiso eMexico
Kwenzeka njani ukuba ube nezithuthi zikawonke-wonke zasimahla? -Estonia -Tallinn
Kuhambo lwethu lokuqala oluya eTallinn, ikomkhulu lase-Estonia, ukufika kwethu kwisikhululo seenqwelomoya samangaliswa sisikhululo seenqwelomoya esingaqhelekanga. Ngapha koko, ibijongeka ngathi yeyokuba yenzelwe ukuba ibe yenye yezona nqwelo moya zipholileyo nezithandekayo ukubakhona. Ndiyavuma ukuba ngexesha lokuhamba kwam zimbalwa izikhululo zeenqwelo moya ezibonakala ngathi…
Funda ngokugqithisileyo Kwenzeka njani ukuba ube nezithuthi zikawonke-wonke zasimahla? -Estonia -Tallinn
Iindawo ezinomtsalane eGaborone -Botswana
Into emandiyenze eGaborone - Botswana Kuhambo lwam lokuqala oluya eAfrika ndaye ndagqiba kwelokuba ndiwele umda ophakathi koMzantsi Afrika neBotswana. Emva kwayo yonke loo nto, iBrazil ikude kakhulu kwilizwekazi laseAfrika. Ke kubonakala ngathi licebo elihle ukuwela umda ujonge ukuba iBotswana ikhangeleka njani…
Funda ngokugqithisileyo Iindawo ezinomtsalane eGaborone -Botswana
Singayiphumelela njani imfazwe yehlabathi yesithathu? Impendulo inokubakho kuwe.
Ungayiphumelela njani iMfazwe yeHlabathi yeSithathu kunye neqela labakhenkethi?
Funda ngokugqithisileyo Singayiphumelela njani imfazwe yehlabathi yesithathu? Impendulo inokubakho kuwe.
UMzantsi Afrika Udliwanondlebe nommi wase Mzantsi Afrika. Kwaye kwabakho utshintsho olungalindelekanga embindini wodliwanondlebe.
Ngaphambi kokuba ndiqale, kufuneka nditsho ukuba olu dliwanondlebe lwenziwe ngokupheleleyo. Sasingenalo ixesha lokucinga ngeskripthi kwaye senziwa kuphela ngamandla. Kwingcebiso kaLexiegh. Wayefuna into eyiyo! Eyona ndlela yokufezekisa oku kungayenza ngoluhlobo, usebenzisa iselfowuni ukurekhoda kwaye…
Funda ngokugqithisileyo UMzantsi Afrika Udliwanondlebe nommi wase Mzantsi Afrika. Kwaye kwabakho utshintsho olungalindelekanga embindini wodliwanondlebe.
Ngaba i-Knights Templar yayikhona?
Ibali elihle ukusuka kwilizwekazi elidala.
Funda ngokugqithisileyo Ngaba i-Knights Templar yayikhona?
Ukutyelela eRiga? IsiXeko esidibanisa uyilo olutsha noludala-eLatvia
Ewe, ngaphambi kokuba ndithethe ngeRiga uqobo, kutheni ndiye ndaphela apho? Kumnqweno wokundwendwela onke amazwe ehlabathi, okanye ubuninzi bawo, iLatvia yayiphakathi endleleni, embindini wendlela yayiyiLatvia. Phakathi kwe-Estonia neLithuania.😎 Ndothukile kukudlula kwe…
Funda ngokugqithisileyo Ukutyelela eRiga? IsiXeko esidibanisa uyilo olutsha noludala-eLatvia
1- Kutheni le nto ndincoma iBanco Inter? Ukuba ufuna iakhawunti yokujonga iBrazil, nangasiphi na isizathu, nokuba kungenxa yokuba uhlala apha eBrazil, okanye ngenxa yomsebenzi, okanye ukuza kufunda, nokuba kungenxa yokhenketho, okanye ukuthumela okanye ukufumana iintlawulo ezivela phesheya ingcebiso yeyokuba…
Funda ngokugqithisileyo I-Int
ILuxembourg-iGrand Duchy yokugqibela yeHlabathi
ILuxembourg lilizwe elincinci eYurophu, elumelwane eFrance, eBelgium naseJamani. Kwaye kutheni kubalulekile ukutyelela? Kuba ngowokugqibela u-Duchy emhlabeni. Kwaye mhlawumbi uyazibuza: kwaye yintoni iGrand Duchy? Impendulo elula: lilizwe, endaweni yomongameli onyuliweyo, elinomthetheli omkhulu…
Funda ngokugqithisileyo ILuxembourg-iGrand Duchy yokugqibela yeHlabathi
Njengoko kuthenjisiwe kwisithuba sokugqibela, ndiza kuthetha ngelizwekazi lesibhozo. Liphi ilizwekazi leSibhozo? Ihlala phezu kwentloko yethu. Emajukujukwini, kwi-Orbit yoMhlaba! Ekukhangeleni imifanekiso yesathelayithi ukuze wazi ubungakanani bemililo eBrazil iyonke. Oko kukuthi, kubandakanya ii-biomes ezi-6 eziphambili zaseBrazil ...
Funda ngokugqithisileyo Ilizwe lesibhozo
Ungathini xa ndikuxelela ukuba ngokwethu (ngabantu) umhlaba ufumene ilizwekazi lesixhenxe? Ewe, iindaba zikhangeleka zilungile, kodwa ngelishwa akunjalo. Ngenxa yenkunkuma eqokelelwe kwiilwandlekazi eziqhutywa yimisinga yolwandle kwaye ziphele zigxile kwindawo yoLwandlekazi lwePasifiki phakathi kweCalifornia neHawaii ...
Funda ngokugqithisileyo Ilizwe lesixhenxe
Iingcebiso ngento onokuyenza e-Barcelona
I-Barcelona inkulu kwabo bathanda uyilo olungaqhelekanga. Iifadade kunye nendawo yangaphakathi yeendawo zabakhenkethi ezidweliswe ngezantsi zizisa amava awodwa kwaye aphume nakweyiphi na indwendwe. Ukuba olu luhambo lwakho lokuqala lokuya e-Barcelona landela ezi ngcebiso: 1- uLwimi: Into yokuqala oza kuyibona ...
Funda ngokugqithisileyo Iingcebiso ngento onokuyenza e-Barcelona
Andazi ukuba ndiyiqala njani le post, ke ndiza kukuxelela ukuba luyintoni umbono wakhe. Ihlawula irhafu kwi-Notre-Dame Cathedral, eyatshiswa ngo-Epreli 15, 04. Yinto eshukumise abantu abaninzi, ukongeza kwisiphithiphithi nosizi oluziswa yile nto. Okwam owayehamba eFrance nabahlobo kunye…
Funda ngokugqithisileyo Umvuzo kwi-Notre-Dame
Uhamba njani ngeParis?
Njengoko bendithembisile kwisithuba sangaphambili, kwixa elizayo xa ndiza kuthetha ngeParis ndiza kuphathela ezinye iingcebiso apha. (Iposti apho ndenza khona esi sithembiso yile) Kulungile ke lixesha lokuba ugcine isithembiso. Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuchaza indawo yakho yokuqala ...
Funda ngokugqithisileyo Uhamba njani ngeParis?
Ngaba i-caffeine kunye neziyobisi ze-cocaine ziyavalwa?
Kwiposi yangaphambili senze udliwanondlebe kunye nomfazi wasePeruvia kunye nabakhenkethi baseBrazil malunga nePeru. (Ungafikelela kolu dliwanondlebe olukhulu ngokunqakraza apha). Ngenxa yakhe ndaye ndagqiba kwelokuba ndize nomnqweno wokufuna ukwazi malunga necoca tea yasePeruvia. Iti yeCoca Into yokuqala enomdla kukuba iti yecoca ithathwa apho ...
Funda ngokugqithisileyo Ngaba i-caffeine kunye neziyobisi ze-cocaine ziyavalwa?
Kutheni amaFrentshi aphikisana neentonga zawo xa uthetha isiNgesi kwaye le nto iyenzani namaBrazil?
Namhlanje siza kuthetha ngeelwimi kwaye kutheni amaFrentshi eshwabanisa iimpumlo zabo xa sithetha isiNgesi nabo. Ewe, phantse bonke abantu endikhe ndathetha nabo malunga neFrance, kwaye bebekhona, bahlala bethetha izinto ezimbini: Ukuba kukho indawo entle, entle. Kwaye amaFrentshi ashwabeneyo ngeempumlo ukuba u ...
Funda ngokugqithisileyo Kutheni amaFrentshi aphikisana neentonga zawo xa uthetha isiNgesi kwaye le nto iyenzani namaBrazil?
1 2 Elandelayo
Bhalisa kwiblogi nge-imeyili
Ngenisa i-imeyile yakho ukuze ubhalise kule bhlog kwaye ufumane iimpapasho ezintsha.
yi Uyilo loMxholo wePro
Iphepha lokuvala iwijethi
Ipes emhlophe nge-07 kaSeptemba ... Enkosi ngokusinika lo myalezo ubalulekileyo woxolo.
Ngamaxesha anzima yiba njenge # ipê ethi nakwi # yomile # iintyatyambo kwaye ukhe amanzi ezantsi kwequla ngeengcambu zayo eziqinileyo ukuze uzigcine ume nkqo. Kwaye yenza #shadow kwabo bangazikhumbuli nokubakhumbula xa bengekho. Enkosi ipes. #ycinge
Jonga #lake yethu # yeentaka ezenza # impumelelo
Faka idilesi yakho ye-imeyile ukuze ubhalisele kule bhulogi uze ufumane izaziso zeempapasho ezintsha nge-imeyile.
Dibanisa 240 nezinye ababhalisele
Ilayisha izimvo ...